Iftiinka isha - FL410 / FL411
Tan iyo bilowgii, Eurborn wuxuu u hoggaansamayaa qiyamka "furfurnaan iyo caddaalad, wadaagid iyo kasbasho, raacdo heer sare ah, abuuritaan qiime", u hoggaansamaya falsafadda ganacsiga ee "daacadnimada iyo hufnaanta, hanuuninta ganacsiga, habka ugu wanaagsan, waalka ugu fiican ". Waxaan aaminsanahay ...
Nalalka Eurborn Inground - noloshaada ka dhig mid wanaagsan
Eurborn waxay had iyo jeer raacdaa ruuxa ganacsi ee "Tayada, Waxtarka, Hal-abuurka, iyo Daacadnimada". Eurborn waxay leedahay waaxda caaryada u gaarka ah iyo waaxda cilmi baarista iyo horumarinta. Dhammaan wasakhda ayaa iskeed loo soo saaray, markaa way badbaadin kartaa waqtiga naqshadeynta wax soo saarka iyo ...
NALKA BARI - Kooxda Qoyska
ML1021, PL021, PL023, iyo PL026 waa taxane qoys oo caan ah. Laga soo bilaabo maqaalka, waxaad ku arki kartaa muuqaalka yar yar ilaa weyn oo si xamaasad leh. Awooddu waxay ka timid 1W ilaa 6W doorashadaada. Wax soo saarkani waa jahayn, sidaa darteed waxaa loo isticmaalaa in lagu iftiimiyo focu ...
BL100-Doorashadaada Laydhka Yachting-kaaga
Marka la isku daro tayada sare iyo qalabka, maareynta taxaddar leh, astaamaha qiimaha macquulka ah, taageerada aadka u fiican iyo iskaashi mug leh oo lala yeesho macaamiisha, waxaan sameynay cilmi baaris si aan u siino macaamiisheenna waxyaabaha ugu fiican ee ku dayashada mudan. Waa ins ...
Ha cagaarnaado jawiga shaqada iyo shaqada
Waxaa qoray admin on 21-06-03
Eurborn waxay had iyo jeer u heellan tahay ilaalinta deegaanka. Gees kasta oo ka mid ah xafiiskeenna, dhir kala duwan ayaa la dhigaa. Qaybta macnaha leh ayaa ah in dhir kastaaba mar la wada daayay oo markii dambe uu dib u soo ceshay maareeyahayagu si uu ugu oggolaado inay dib u dhashaan fursad ...
Waxyaabaha Xiddiga - GL116 ee nalka dhulka
Soo bandhigida nalalka nalalka iibiya ee kulul, GL116, GL116C, GL116H, GL116Q, GL116SQ. Heerka, oo waxaa jira awood 1W, 1.3W, 3W, 3.5W si aad u doorato. Isla mar ahaantaana, si loo waafajiyo bey'adaha isticmaalka kala duwan, waxaa xakamayn kara RGB ama DM ...
Nalka dhulka hoostiisa-ogeysiis GL112
Marka laga hadlayo iftiinka dhulka hoostiisa / biyaha hoostooda GL112, waxaad awood u leedahay inaad doorato awooda 0.5W, 1W ama 1.3W iftiinka aasan ee GL112. Qalabka guud ee badeecada wuxuu ka sameysan yahay birta birta ka sameysan oo birta ka sameysan 316. Waxaa lagu qalabeeyaa laambado CREE ah oo laga keeno Mareykanka ...
Eurborn - Daloolinta dabka, qaado taxaddar
In kasta oo Eurborn ay diiradda saareyso soo saarista nalal kala duwan, oo ay ku jiraan iftiinka dhulka gudihiisa, nalka gidaarka, iftiinka Spike, iwm. Sidaa darteed, si loo wanaajiyo wacyiga shaqaalaha, Eurborn wuxuu abaabulay layli dabka Abriil 20 ...
Kheyraadka dib loo cusboonaysiin karo Eurborn daryeel
Waxaa qoray admin on 21-04-07
Eurborn waxay had iyo jeer muhiimad weyn ku leedahay ilaha dib loo cusboonaysiin karo ee agabyada. Waxaan had iyo jeer jecelnahay hadiyadda dabiiciga ah ee aadanaha. Wixii nalalka birta ah ee birta ah ee ka baxa dhulka hoostiisa iyo horumarka nalalka LED-ka, waxaa naga go'an inaan alaabteena ka dhigno mid ...
Calaamadda Laser ee iftiiminta dhulka gudihiisa
Waqtiyadi hore, astaamaha alaabooyinka waxaa lagu calaamadeeyay koodh koodh koodh ah, laakiin daabacaadda khadku ma aha oo kaliya mid sahlan in la libdhiyo, laakiin sidoo kale bey'ad ahaan aan u fiicnayn. Waxay kaloo soo saartaa gaas waxyeelo leh ...